Diyaaradda cusub ee Hindida ah ee aadka u jaban ayaa laga yaabaa inay Boon u noqoto Boon
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda cusub ee Hindida ah ee aadka u jaban ayaa laga yaabaa inay Boon u noqoto Boon
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Hindiya • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Hawlgal cusub ayaa noqon kara mid ka mid ah heshiisyada ugu waaweyn ee sannadka ka baxsan Mareykanka si loo iibsado ama loo kireeyo diyaaradda Boeing 737.
Boeing waxay u aragtaa fursad ay ku hagaajin karto booskeeda Hindiya.
Bilyaneerka reer Hindiya ayaa ku dhawaaqay gaadiid-qaade cusub oo aad u jaban.
Hawlgal cusub ayaa durba hore u socda,
Sameeyaha diyaaradaha Maraykanka Boeing waxay heli kartaa fursad ay dib ugu soo ceshato dhulkii lumay ee Hindiya iyada oo bilyaneerka Rakesh Jhunjhunwala uu ku dhawaaqay qorshe lagu bilaabayo diyaarad cusub oo aad u jaban oo Hindi ah.
Joogitaanka suuqa Boeing ee Hindiya waxaa dhaawacay dhicitaanka mid ka mid ah macaamiisheeda ugu weyn, Jet Airways, laba sano ka hor.
Jhunjhunwala, oo loo yaqaan “Warren Buffett -ka Hindiya” ee ku aaddan maalgashiyada saamiyada ee guuleysta, wuxuu qorsheynayaa inuu la kaashado agaasimayaashii hore ee IndiGo, shirkadda ugu weyn ee xamuulka ee dalka, iyo Jet Airways si ay u daboolaan baahida safarka hawada gudaha.
In kasta oo soo jeedinta Jhunjhunwala ee Akasa Air ay timaaddo xilli warshadaha duulimaadyada Hindiya ay la daalaa dhacayaan saamaynta masiibada COVID, taas oo keentay in shirkadaha duullimaadyadu ay lumiyaan balaayiin doollar, rajada muddada dheer ee waaxda ayaa ka dhigaysa suuq kulul oo loogu talagalay kuwa sameeya diyaaradaha Boeing iyo Airbus.
Mid ka mid ah ilaha warshadaha ayaa sheegay in mashruuca cusub uu durba u dhaqaaqay dhanka noqon kara mid ka mid ah heshiisyada ugu waaweyn sanadka ka baxsan Mareykanka si uu u iibsado ama u kireeyo 737s.
Boeing, tani waxay fursad weyn u tahay in la dhexgalo oo la kordhiyo cayaartooda, iyadoo la tixgelinayo inaysan lahayn hawlwadeen kale oo weyn oo ah 737 diyaaradood oo ay ku leeyihiin Hindiya marka laga reebo SpiceJet.
Boeing ma aysan ka hadlin qorshayaasha Akasa laakiin waxay sheegtay inay had iyo jeer raadiso fursado ayna kala hadasho macaamiisha hadda iyo kuwa suurtagalka ah sida ugu wanaagsan ee ay u taageeri karto maraakiibtooda iyo baahidooda shaqo.
Jhunjhunwala, oo ka fikiraya inuu maalgashado $ 35m oo lahaan doona boqolkiiba 40 markabkan, wuxuu rajaynayaa inuu ka helo wasaaradda duulista Hindiya shahaado diidmo ah 15ka maalmood ee soo socda, ayuu yidhi. Kooxda duulimaadka ee qiimaha jaban ayaa eegaya inay dhisaan diyaarad 70 diyaaradood oo rakaab ah 180 XNUMX qof afar sano gudahood, ayuu yiri.
Akasa kuwa kale ee aasaasay waa Aditya Ghosh, oo toban sano la qaatay IndiGo laguna amaanay guushiisii ​​hore, iyo Vinay Dube, oo ahaa agaasimihii hore ee Jet oo isna la shaqeeyay Delta.
Cirka Hindiya waxaa xukuma gaadiidleyda qiimaha jaban (LCCs) oo ay ku jiraan IndiGo, SpiceJet, GoFirst iyo AirAsia India, badankooduna waxay ka hawlgalaan raxan diyaarado ciriiri ah oo Airbus ah.
Boeing ayaa xukuma suuqa weyn ee Hindiya ee 51 diyaaradood laakiin dagaalada socdaalka iyo qarashka badan waxay keeneen khasaare soo gaaray gaadiidleyda adeegga buuxa, oo ay ku jiraan Kingfisher Airlines sanadkii 2012 iyo Jet Airways sanadkii 2019, taasoo ka dhigeysa LCCs iyo Airbus inay xitaa ka awood badan yihiin.
Saamigii Boeing ee 570-kii diyaaradood ee cidhiidhiga ahaa ee Hindiya ayaa hoos ugu dhacay boqolkiiba 18 ka dib markii ay Jet dhimatay boqolkiiba 35 sannadka 2018, xogta laga helay la-tashiga CAPA India ayaa muujinaysa. Diyaaradda Jet ayaa dhawaan laga badbaadiyay musalafnimada waxaana la filayaa inay mar kale duusho.
Diyaaradaha Hindiya ayaa leh in ka badan 900 oo diyaaradood oo diyaarsan, kuwaas oo 185 ka mid ah ay yihiin Boeing 737 diyaaradood halka 710 ay yihiin Airbus, taas oo lagu tirinayo IndiGo mid ka mid ah macaamiisheeda ugu weyn caalamka.